ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးလို့ ယူဆရတဲ့ ထူးထူးခြားခြား အရာဝတ္ထု ( ၅ ) မျိုး - Shwe Khit Online TV
HomeAmazingကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးလို့ ယူဆရတဲ့ ထူးထူးခြားခြား အရာဝတ္ထု ( ၅ ) မျိုး
ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးလို့ ယူဆရတဲ့ ထူးထူးခြားခြား အရာဝတ္ထု ( ၅ ) မျိုး
October 7, 2021 Yan Amazing, World Top 0
ပရိသတ်ကြီးကို အခုတစ်ခါပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှေးအကျဆုံးရယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ အရာ၀တ္တုတွေအကြောင်းကို ပြောပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဘယ်လိုအရာတွေက သက်တမ်း ရှေးအကျဆုံး ဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ အောက်ကပုံလေးတွေ တစ်ပုံချင်းစီကို ကြည့်လိုက်ပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
၁ ။ Jack Hills Zircon
ပထမဦးဆုံး ပြောပြပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဩစတေးလျနိုင်ငံ ၊ Jack Hills တောင်ကုန်းတွေမှာ တွေရှိခဲ့တဲ့ Zircon အမည်ရှိ ပုံဆောင်ခဲတွေ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Zircon ပုံဆောင်ခဲတွေရဲ့ သက်တမ်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လက်ရှိရှာတွေ့သမျှတွေထဲမှာ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး အရာအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပုံဆောင်ခဲတွေရဲ့ သက်တမ်းကို နည်းပညာအကူအညီနဲ့ စစ်ဆေးကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ နှစ်ပေါင်း ( ၄.၃၇၅ ) ဘီလျံ သက်တမ်းခန့်ရှိနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
ဒါ့ကြောင့် Zircon ပုံဆောင်ခဲတွေဟာ ကမ္ဘာမြေကြီး စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး နှစ်ပေါင်း ( ၁၆၅ ) သန်းအကြာမှာ စတင် ဖြစ်ပေါ်လာတာလို့ ပြောလို့ရပါတယ် ။ နောက်ပြီး ပုံဆောင်ခဲတွေကို အသေးစိတ် လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ နှမ်းဖတ်ကျောက်တွေလိုမျိုး ရေဓာတ်ကြွယ်၀တဲ့ ကျောက်အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Zircon ပုံဆောင်ခဲကို လေ့လာနေတဲ့ ဘူမိပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ အစောပိုင်းကာလတွေတုန်းက ရေမျက်နှာပြင်တွေဟာ အလျင်အမြန်အေးခဲသွားပြီး ရေဓာတ်ကြွယ်၀တဲ့ ကျောက်တုံးကြီးတွေ ဖြစ်စေလာခဲ့တာလို့ ပြောကြားထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၂ ။ Hematite Tubes
နောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့ Hematite Tubes တေွ အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ( ၂၀၁၇ ) ခုနှစ်တုန်းက သုတေသီ တစ်ဖွဲ့ဟာ နှစ်ပေါင်း ( ၄ ) ဘီလျံ သက်တမ်းရှိတဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတစ်ခုကို ရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ် ။ ဒီ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေကို အသေးစိတ် လေ့လာကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ အတွင်းထဲမှာ သေးငယ်တဲ့ hematite tubes လေးတွေ ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့တာပါ ။ သုတေသီ တွေရဲ့ ပြောကြားချက်အရ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေထဲမှာဆိုရင် သက်ရှိတွေထဲမှာ အများဆုံးတွေ့ရတတ်တဲ့ ကာဘွန် နဲ့ ဖော့စဖော့ရပ်စ်လိုမျိုး ဓာတ်သဘောတွေ ပါဝင်နေတယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
နောက်ထပ် ပြောထားတာကတော့ တစ်ကယ်လို့ သူတို့ရဲ့ သုတေသန ပြုလုပ်ချက်တွေကို ဒီထက် ပိုပြီး မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ခဲ့ရင် အခုရှာတွေ့ထားတဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေဟာ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ အစောပိုင်းကာလတွေ တည်းက တည်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြသနေတာပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၃ ။ Stromatolites
အခုမြင်နေရတာကတော့ နှစ်ပေါင်း ( ၃.၅ ) ဘီလျံသက်တမ်း ရှိတဲ့ Stromatolites တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီ Stromatolites ကျောက်ကိုတော့ ဩစတေးလျနိုင်ငံထဲက Archaen Rocks တွေထဲမှာ ရှာတွေ့ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ Stromatolites ဆိုတာ စိမ်းပြာရေညှိ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေကနေ ဖြစ်လာတဲ့ ကျောက်အလွှာတွေ ကို ခေါ်တာပါ ။ လက်ရှိမှာတော့ ကမ္ဘာပေါ်က တစ်ချို့နေရာတွေမှာ Stromatolites ကျောက်တွေဟာ ရှိနေသေးပြီး အတော်များများကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ဘီလျံ အကြာတည်းက ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
လေ့လာမှုတွေအရတော့ အလွန်ရှေးကျတဲ့ ကာလတွေတုန်းက ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ Stromatolites ကျောက်တွေ တော်တော်လေး ပေါများစွာ ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ ။ ( ၂၀၁၃ ) ခုနှစ်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသန အသစ် တစ်ခုမှာတော့ Stromatolites ကျောက်တွေဟာ foraminifera လို့ခေါ်တဲ့ သက်ရှိ ဆဲလ် တစ်ခုကနေ ကူးစက်ခံရပြီး ဖြစ်တည်လာတာ လို့လည်း ပြောထားပါသေးတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၄ ။ UR 501 Jawbone
နောက်ထပ်ပြောပြပေးမှာကတော့ hominids လူမျိုး တစ်ဦး ရဲ့ မေးရိုး အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ကမ္ဘာပေါ်က ရှေးအကျဆုံး လူသား မျိုးနွယ်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ hominids ( Homo မျိုးနွယ် ) လူသားတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ( ၂.၅ ) သန်း ခန့်လောက်က ပေါ်ပေါက်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အခုမြင်နေရတာကတော့ Homo rudolfensis အုပ်စုထဲက လူတစ်ဦး ရဲ့ မေးရိုး ဖြစ်ပြီး ဒီမေးရိုးကိုတော့ UR 501 လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
UR 501 ကို မတွေ့ခင် အချိန်အထိ ရှေးအကျဆုံး လူသားမျိုးနွယ်တွေရဲ့ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းတွေကို အာဖရိက အလယ်ပိုင်းမှာ ရှာမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး ။ အခု ရှာတွေ့ခဲ့တဲ့ မေးရိုးကိုတော့ မာလာဝီ နိုင်ငံထဲမှာ တူးဖော် တွေ့ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ်ပေါင်း ( ၂.၃ ) သန်းခန့် သက်တမ်း ရှိတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သုတေသီ တစ်ချို့ရဲ့ အဆိုအရတော့ Homo လူမျိုးစုတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်း ( ၂.၅ ) သန်း လောက်က အာဖရိက အရှေ့ပိုင်းမှာ ရှိခဲ့တဲ့ ဦးနှောက် သေးငယ်တဲ့ ပရိုင်းမိတ်ကနေ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတာ လို့ ဆိုထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
၅ ။ Kish Tablet
အခုနောက်ဆုံး ပြောပြပေးမှာကတော့ နှစ်ပေါင်း ( ၅၅၁၉ ) နှစ် သက်တမ်း ရှိတဲ့ Kish Tablet အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရှေးဟောင်း အီဂျစ် လူမျိုးတွေ နဲ့ တစ်ခြားသော လူမျိုးစုတွေ ရဲ့ အစောပိုင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာ ဆိုရင် မှတ်တမ်းတွေကို ရေးမှတ်ဖို့အတွက် အရုပ်သင်္ကေတတွေကို အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အစောဆုံး စာရေး နည်းစနစ် အမှန်ကိုတော့ ဘီစီအီး ( ၃၁၀၀ ) ဝန်းကျင်လောက်မှာ မက်ဆိုပိုတေးမီးယားမှာရှိတဲ့ ဆူမားရီးယန်း လူမျိုးစုတွေက စတင်တီထွင်ခဲ့ကြတာပါ ။ ဆူမားရီးယန်း လူမျိုးတွေရဲ့ စာရေးနည်းကို ကျူနီဖောင်း (cuneiform ) သတ်ပုံစာရေးနည်းလို့ ခေါ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ( ၃၀၀၀ ) လောက်တည်းက အသုံးပြုခဲ့ကြတာပါ ။ shwekhitonlinetv.com
ရွံ့စေးပြားပေါ်မှာရေးထားတဲ့ ကျူနီဖောင်းစာ အများအပြားရှိခဲ့ပြီး ဒီအထဲမှာမှ Kish Tablet လို့ ခေါ်တဲ့ ကျူနီဖောင်း စာ ကတော့ ရှေးအကျဆုံးလို့ ပြောရမှာပါ ။ Kish Tablet ထဲမှာ ဆိုရင် ရှေ့ဦး ကျူနီဖောင်းစာ သင်္ကေတ တွေကို ရေးထိုးထားကာ ထိုခေတ်တုန်းက အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အရုပ်သင်္ကေတတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းထားပါသေးတယ် ။ နောက်ပြီး ဒီ Tablet ထဲမှာ ဘီစီအီး ( ၃၅၀၀ ) လို့ နေ့စွဲ ရေးမှတ်ထားပြီး ရှေးအကျဆုံး ကျူနီဖောင်း စာတွေကို ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ဆိုထားပါတယ် ။ shwekhitonlinetv.com
အခုဖော်ပြပေးထားတာကတော့ ကမ္ဘာ့ရှေးအကျဆုံးလို့ ယူဆရတဲ့ ထူးထူးခြားခြား အရာဝတ္ထုတွေထဲက တစ်ချို့ကို ပြောပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာလည်း အခုလိုမျိုး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေ တင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ Shwe Khit ကို စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
ကမ္ဘာ့စျေးအကြီးဆုံး နှင့် အမြန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ